China Belt sy Road momba ny fizahantany: Avy any Tonga ka hatrany Afrika no mitarika i China
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » China Belt sy Road momba ny fizahantany: Avy any Tonga ka hatrany Afrika no mitarika i China
Miasa mafy i Shina mba hahazo fitaomana manerantany ary hitarika an'izao tontolo izao amin'ny fehikibo Sinoa sy Road Initiative. Ampahany lehibe amin'izany ny fizahantany. Tonga dia nanao sonia ny fandraisan'anjaran'i Belt and Road China ary nahazo fanalefahana avy any Beijing tamin'ny fotoana fandoavan-trosa fotoana fohy talohan'ny nanombohan'ny fandaharam-potoana sarotra hamerenana ny indram-bola.
Lopeti Senituli, mpanolotsaina politika an'ny praiminisitra Tonga Akilisi Pohiva, dia nilaza tamin'ny Reuters tamin'ny alahady fa nanasonia fanekem-pahatakarana Belt sy Road i Tonga ary nahemotra nandritra ny dimy taona ny indram-bola nifanarahana.
Tonga dia iray amin'ireo firenena nosy valo any Pasifika atsimo izay manan-trosa betsaka amin'i China. Tonga ny fihenan-tsasatra tamin'ny fotoana nanombohan'ny Tonga hanombohana ny famerenam-bola amin'ny trosa, izay antenaina hametraka ny olana goavana amin'ny volany.
Ny Belt and Road Initiative, fantatra ihany koa amin'ny hoe One Belt One Road na ny Silk Road Economic Belt ary ny Maritime Silk Road tamin'ny taonjato faha-21, dia paikadim-pampandrosoana natsangan'ny governemanta sinoa momba ny fampandrosoana ny fotodrafitrasa sy ny fampiasam-bola any amin'ny firenena any Eropa, Azia, ary Afrika.
Ny indostrian'ny fizahantany dia mandray anjara lehibe amin'ny harinkarena faobe sy ny fitomboan'ny harinkarena amin'ny firenena maro. Ny Belt and Road Initiative dia mety ho fomba tsara hampiroboroboana ny fizahantany any amin'ireo firenena manamorona ny Silk Road. Ny fandriam-pahalemana sy fiarovana dia fepetra roa takiana ilaina amin'ny fampiroboroboana ny fizahan-tany amin'ny firenena rehetra. Ny mekanika sasany dia azo raisina hanasoavana ny sehatry ny fizahantany amin'ny fandraisana andraikitra. Ny firenena Belt sy ny làlana rehetra dia mila mifanome tanana ary miara-miasa amin'ny fananganana politikam-pitsangatsanganana mpizahatany hisarihana mpizahatany maro kokoa any amin'ny fireneny.
Ny firenena rehetra dia manana traikefa fizahan-tany maromaro izay tsy manan-tsahala. Ny Great Wall of China, ny Tafika Terracotta any Xi'an ary ny Forbidden City no anisan'ny manintona mpizahatany lehibe indrindra.
Ny maritrano kolonialin'ny lanitra manjelanjelatra any Shanghai dia fampiratiana trano sy trano eropeana mpanjanatany. Nanohina ny fon'ny mpanakanto maro ny fahitana mahavariana indrindra an'i Shina, dia ny “the Li River” ao Guilin. Parta goavambe, harem-pirenen'i Shina, any Chengdu dia tian'ny Shinoa sy ny vahiny ihany koa. Any atsinanan'i Sina, tampon-tanàna malaza any Shina ny tendrombohitra mavo akaikin'i Shanghai. Ny Lapan'ny Potala any Tibet, fantatra ihany koa amin'ny hoe "Heart of the Roof of the World", dia mitazona fitaovana sy lahatsoratra kanto samihafa. Ny tetezana fampiatoana lava fitaratra indrindra eto an-tany, rafitra vaovao sy manintona ny mpizahatany ao amin'ny faritany avaratra atsinanan'i Hebei, nosokafana ho an'ny besinimaro tamin'ny 24 Desambra 2017. Toerana fizahan-tany sinoa 10 voalohany tany 2017 dia Beijing, Shanghai, Xi'an, Guilin, Chongqing, Chengdu , Kunming, Shenzhen, Hangzhou ary Sanya.
Ny zava-misy sy tarehimarika momba ny fizahan-tany any Shina aseho etsy ambony dia ho an'ny taona 2017, izay manondro fa ny isan'ny mpizahatany tonga any Chine aorian'ny hetsika Belt and Road dia mitombo isan-taona. Ny hetsika dia hampiroborobo kokoa ny fizahan-tany sy ny fitomboan'ny harinkaren'i Shina amin'ny taona ho avy.
Toy izany koa, ireo toerana mahavariana sy mahavariana any amin'ny firenena Belt and Road dia mila tadiavo ihany koa. Ny fehikibo sy ny làlana dia mety mitana andraikitra lehibe amin'ny fampandehanana ny fampandrosoana ny fizahantany any amin'ireo firenena manamorona ny làlana Silk. Ny firenena Belt sy Road rehetra dia samy manana ny soatoaviny ara-kolontsaina sy ny toerana kanto hitsidika azy. Ilaina ny mahita sy mijery ny hatsarana miafina sy ny toetran'ny firenena manintona ny Silk Road. Ankoatr'izay, ny programa fifanakalozana kolontsaina dia azo atomboka any amin'ireo firenena Belt sy Road izay hamela ny olona avy amin'ny fiaviana samy hafa hanakaiky sy hizara ny kolontsain'izy ireo.
Ny toerana fizahan-tany Rosiana ambony dia misy an'i Kremlin any Mosko, ny tranombakoka Hermitage, ny farihin'i Baikal, ny Kianja Mena, ny Katedraly Saint Basil, ny Lapan'ny Ririnina, ny Katedraly Kazan ary ny Tranombakoka Rosiana. Toerana fitsangatsanganana an-tampon'i Mongolia dia ny Desert Gobi, farihy Khuvsgul, valan-javaboary Terelj, Karakorum-Erdenezuu, lohasaha Orkhon, valan-javaboary Khustai ary tanàna Ulaanbaatar. Ny toerana tena fizahan-tany any Torkia dia misy an'i Sofya, Efesosy, Cappadocia, lapan'i Topkapi, Pamukkale, Monasiteran'i Sumela, tendrombohitra Nemrut, Ani, Aspendos. Orchard Road, Resorts World Sentosa, Clarke Quay, Gardens by the Bay, Singapore Botanic Gardens, Night Safari ary Singapore Flyer dia mendrika hijerena teboka any Singapore. Martin's Island, Lalbagh Fort, Sompaura Mahavihara, Dhanmondi Lake, Patenga Beach dia maka toerana hitsidihana any Bangladesh. Toerana fitsangatsanganana malaza indrindra any Pakistan dia ny Naltar Valley, Neelum Valley, Fairy Meadows, Shangrila Resort, Deosai Plains, Rama Meadow, Siri Paye, Murree Hills, Swat Valley ary Hunza lohasaha. Ny Heaven on Earth Kashmir, Mini Switzerland 'Swat Valley' ary Mountain Kingdom 'Hunza Valley' no tena manintona mpizahatany ao Pakistan. Ilay K2 mahery any Karakoram Pakistan no tendrombohitra avo indrindra faharoa eto an-tany aorian'ny Mountain Everest.
Taorian'ny fanatsarana ny sehatry ny fandriam-pahalemana dia nitombo 300 isan-jato ny fizahantany tao Pakistan tao anatin'izay taona vitsy lasa izay. Araka ny tatitra vao haingana, mpizahatany 1.75 tapitrisa no nitsidika an'i Pakistan tamin'ny taona 2017 fotsiny. Ny antontan'isa avy amin'ny Pakistan Tourism Development Corporation dia nampiseho fa 30 isan-jaton'ny mpandeha no ao an-trano. Raha ny filazan'ny World Travel and Tourism Council (WTTC) tamin'ny taon-dasa, ny vola niditra tamin'ny fizahan-tany dia nanolotra $ 19.4 miliara ho an'ny toekarenan'i Pakistan ary nahatratra 6.9 isan-jaton'ny vokatra anatiny. Manantena ny WTTC fa hiakatra hatrany amin'ny $ 36.1 miliara ao anatin'ny folo taona.
Ny firenena Belt sy Road dia tokony hanao tetika fampandrosoana ny fizahantany amin'ny alàlan'ny fandriam-pahalemana sy fiarovana. Ny fizahantany Silk Road dia afaka mitana andraikitra lehibe amin'ny fampiroboroboana ny fifanakalozana ara-toekarena sy ny fifandraisana ara-kolontsaina eo amin'i Azia sy Eropa. Miaraka amin'ny fizahan-tany, hivoatra koa ny asa aman-draharaha sy ny varotra any amin'ny firenena landy Silk. Aorian'ny làlam-barotra, Galerie Culture et Traffic Road, ny Làlam-by Silk dia ho làlana mpizahatany mamirapiratra amin'ny sarintanin'izao tontolo izao amin'ny taonjato faha-21. Amin'izao fotoana izao, nanomboka ny fizahantany Silk Road, na izany aza, mila fanentanana ny mpizahatany mba hampiroborobo sy hitarika momba ireo toerana fizahan-tany. Ny firenena Belt sy Road manana sehatra voajanahary tsara tarehy, tantara taloha, kolontsaina lalina ary tsiro foko manankarena dia azo antoka fa ho lasa mpizahatany ambony indrindra eran-tany.
Ireo firenena Silk Road dia mila fampiroboroboana ny tsena araka ny tokony ho izy, mila mandray andraikitra ny governemanta ary mandray anjara mavitrika amin'ny fampiroboroboana ny fizahantany. Ireo firenena Silk Road dia mila manao ezaka mifanaraka amin'ny fampiroboroboana ny indostrian'ny fizahantany. Ny serivisy e-visa, e-ticketing ary e-famandrihana dia azo ampidirina manokana ho an'ny firenena Belt sy Road izay hanamorana ny mpizahatany hahatratra ny toerana tadiaviny.
Miaraka amin'ny fitomboan'ny indostrian'ny mpizahatany, faritra hafa maro toa ny varotra, ny lojika, ny kolontsaina, ny harin-karena faobe, ny indostria toekarena sns amin'ireo firenena làlam-pandeha Silk dia hohamafisina. Raha fintinina, ny firenena an-dàlam-pandrosoana dia hanana fotoana bebe kokoa hampisondrotra ny harinkareny ary hisambotra ilay fotoana volamena maha-anisan'ny Belt and Road Initiative an'i Shina.
Minisitry ny fizahantany Yucatan, Michelle Fridman Hirsch: nandresy izahay!
Avy any Doha mankany Antalya, Bodrum, Mykonos ary Málaga amin'ny Qatar Airways